Vaovao - Fomba hisafidianana basy rano fanerena
Miaraka amin'ny fiakaran'ny fananan'ny fiara dia nisondrotra ihany koa ny vidin'ny fanasana fiara. Betsaka ny tompona fiara tanora no nanova ny fomba fijeriny hisafidianana fanasana fiara an-trano mora vidy, haingana, mora ary milamina. Rehefa manasa fiara ao an-trano dia ilaina koa ny manana basy fanasana rano. Rehefa mividy basy fanasana rano manasa fiara dia tena zava-dehibe ny fiheverana ny marika. Ka iza amin'ny basin'ny rano fanasana fiara an-trano no tsara kokoa? Ny sasany amin'ireo tompona fiara dia mividy fitaovam-piadiana mahery vaika manasa lamba any an-trano, ary misy kosa ny tompona fiara mividy mpanasa fiara mora entina. Andeha hojerentsika ny fomba hividianana basy rano avo lenta ho an'ny fanasana fiara ao an-trano.
Rehefa mikaroka amin'ny tranokala miantsena isan-karazany ny olona ary mahita fa maro ny marika basy rano avo lenta ho an'ny fanasana fiara ao an-trano, ary lehibe ihany koa ny fahasamihafana. Ny sasany 20 ka hatramin'ny 30 yuan ihany no vidiny, ary ny sasany kosa mahatratra hatramin'ny roa ka hatramin'ny telonjato yuan. Ho valin'ny fanontaniana toy ny "Iza amin'ireo marika basy rano avo lenta ho an'ny fanasana fiara no tsara", nanangona vaovao vitsivitsy ho anao izahay.
Ny basy ao an-tokatrano manadio rano mahery setra dia fitaovana fanadiovana avo lenta natao manokana ho an'ny fiaran'ny mpianakavy, izay manana tombony amin'ny fitsitsiana rano, fanerena ary fiarovana ny tontolo iainana. Amin'izao fotoana izao, misy marika marobe amin'ny basy rano avo lenta ho an'ny fanasana fiara amidy amin'ny Internet, marika manana kalitao azo antoka ny ankamaroany dia ahitana an'i Huber, Tiger Knight, Gabriel, ary Orichi.
Ny tombony azo amin'ny basin'ny rano avo lenta ho an'ny fanasana fiara ao an-trano
Ny fampiasana mora no tombony lehibe indrindra amin'ny basina rano fanerena be amin'ny fanasana fiara ao an-trano. Raha tsy misy basy rano faneriterena ambony noho ny fanasana fiara ao an-trano dia hanakorontana tokoa ny fanasanay fiara. Raha tsy misy ny basy rano be fanerena amin'ny fanasana fiara dia tsy afaka manasa ny fiara amin'ny siny fotsiny isika rehefa manasa ny fiara. Tsy maintsy reraka be izany. Raha manana basy anaty rano isika dia afaka misoroka an'io olana io, mba hahafahantsika mitsitsy angovo rehefa manasa fiara, ary tsy mila mihazakazaka miaraka amin'ny siny. Madio kokoa koa ny fanasana fiara amin'ny basina rano, ary mora kokoa ny manadio ny fiara. Rehefa manasa fiara ao anaty siny dia tsy mora maina ny rano, ary ny faritra môtô mora entin'ny rano.
Rehefa manasa fiara dia ny rano no be mpampiasa indrindra. Rehefa manasa siny ny fiara isika dia sasana toy ny safo-drano ny fiara. Ka ny fitsitsiana rano dia tena zava-dehibe amintsika. Mpinamana fiara maro no hilaza fa tsy miraharaha rano izy ireo. Tsy raharahanao fa ny fiaran'ny fiara anao. Raha be loatra ny rano ao amin'ny vatana dia hiditra mora foana amin'ny faritra sasany amin'ny fiara izy io. Rehefa manomboka isika, dia azo inoana fa tsy mandeha amin'ny laoniny. Ny jiron'ny fiara dia ohatra tsara. Amin'ny tranga maro, ny fahasimban'ny jiro fiara dia vokatry ny rano miditra amin'ny fitoeran-jiro.
Ahoana ny fomba hisafidianana basy rano fanerena be ao an-trano?
Amin'ity dingana ity, ny zava-dehibe indrindra hividianana basy rano avo lenta dia ny fitaovana, ny asa-tanana ary ny antsipiriany fa tsy ny marika. Manaraka izany, hizara traikefa sy fahaizana vitsivitsy aminao izahay amin'ny fividianana basy rano avo lenta amin'ny fanasana fiara ao an-trano.
1.Jereo ny tsindry basy anaty rano mahery.
Ny bikan'ny basy fanasana rano avo lenta dia tsy dia tsotra, tena manam-pahalalana. Ny singa mora tohina indrindra amin'ny basy rano avo lenta dia ny nozera. Ny tsara indrindra dia ny misafidy noza vita amin'ny varahina.
2. Jereo ny fantsom-basy avo lenta.
Ny fantsom-basy anaty rano mahery vaika dia tsy maintsy mahatohitra ny tsindry, ny hatsiaka, ny hafanana be, ny harafesina ary ny fahanterana. Torohevitra: malefaka ny fantson-tsindry ambany ambany. Rehefa nofenoina rano be tsindry izy ireo dia vaky mora foana rehefa tototry ny kodiarana izy ireo ary hihantitra mora foana rehefa avy nampiasaina nandritra ny fotoana ela. Ny tsara indrindra dia ny mifidy fantsom-panasana fiara vita amin'ny EVA na PVC.
3.Jereo ny tsindry ataon'ny basy rano mahery.
Fantatra tsara fa rehefa manadio amin'ny basin'ny rano misy tsindry mafy ianao, na madio ny fanadiovana dia miankina betsaka amin'ny hoe matanjaka ny tsindry rano nararaka. Raha kely ny tsindry rano miparitaka dia hisy fiatraikany amin'ny hafainganam-pandehan'ny fanadiovana ary matetika ny basy rano avo lenta manana kalitao tsara dia matetika mamokatra tsindry rano mahery, mba hahatratrarana ny tanjon'ny fanesorana haingana ny tasy amin'ny fiara.
4. Jereo ny fitaovana ampifandraisin'ny basy rano avo lenta.
Ny kalitaon'ny fitaovam-pitifirana basy rano dia misy fiantraikany mivantana amin'ny androm-piainan'ny basy rano avo lenta. Ny basy rano faneriterena avo lenta amin'ny ankapobeny dia mampiasa fitaovana varahina rehetra ho toy ny lohan'ny lohan-drano sy ny fantsom-pantson-drano, raha ny plastika mora ampiasaina amin'ny baskety kosa matetika vita amin'ny plastika. Mora mivoaka ny rano ary tsy maharitra mateza.
5. Karakarao ny tahan'ny fiderana sy ny habetsaky ny varotra amin'ny basy rano avo lenta.
Raha misy mikasa ny hividy basy anaty rano be fanasan-doha na mpanasa lamba amin'ny Internet, azony atao ny mijery ny varotra sy ny naoty tsara azon'ny basy rano avo lenta. Ny tahan'ny varotra sy fiderana basy rano avo lenta ho an'ny fanasana fiara ao an-trano dia maneho ny halaviran'ny faneken'ity mpanasa fiara ity an'ny tompona fiara.